Axiskhabar | एक्सिस खबर
टपन्यूज एक्सिस खबर - ५ घण्टा अगाडि 0
वीरगञ्ज । १५ असारको राती १० बजेतिर किशोरीको शव गोप्य ढंगले जलाउँदै गरेको भन्ने खबर प्रहरीमा आयो । घटनास्थलको लोकेसन थियो, पर्साको बहुदरमाई नगरपालिका–७ बिश्रामपुर ढोङ्गी खोलाको मसानघाट । मृतक थिइन, श्यामबाबु प्रसाद कलवारकी १४ वर्षीया छोरी महिमा कुमारी । किशोरीले घरमै विष सेवन गरेर आत्महत्या गरेको सूचना प्रहरीसम्म आइपुगेको थियो । तर प्रहरीलाई मात्रै हैन, गाउँलेलाई समेत खबर नगरी परिवारले घाटमा लगेर शव जलाएका थिए । घटना शंकास्पद देखिएपछि नजिकैको प्रहरी चौकी महुवनबाटे...
टपन्यूज एक्सिस खबर - ९ घण्टा अगाडि 0
काठमाडौं । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचन अघि (वैशाख २६ गते) एउटा भविष्यवाणी गरे । उनले असार १७ गते नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार नरहने र गठबन्धनसमेत भत्किने दाबी गरे । स्थानीय चुनावको मुखमै ओलीले देउवा सरकार र गठबन्धनको भविष्यवाणीबारे कतिपयले उडाएर टारे...
टपन्यूज एक्सिस खबर - २१ घण्टा अगाडि 0
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला पक्षको बैठक सकिएको छ। राजधानीको बत्तिसपुतलीस्थित अनुपम फुडल्यान्डमा बिहीबार अपरान्ह बसेको बैठक शुक्रबार दिउँसो २ बजेसम्मलाई स्थगित भएको छ। बिहीबारको बैठकमा ‘कन्स्ट्रक्टिभ विद्रोह’को कुरा भएको केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले जानकारी दिए। ‘बिहीबारको निष्कर्षमा कन्स्ट्रक्टिभ विद्रोहको कुरा भएको छ। यति शब्द सम्झनुस्। दोस्रो,...
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको एक प्रतिवेदनले कार्यकर्ताले सशस्त्र युद्धका बेला माओवादीको ज्यादती बिर्सन नसक्दा गठबन्धनबाट अपेक्षित परिणाम नआएको जनाएको छ । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको...
टपन्यूज एक्सिस खबर - १ दिन अगाडि 0
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पक्ष अलग हुन सहमत भएका छन् । डा. भट्टराईले...
काठमाडौं । प्रदेश सभाबाट बजेट पास भएसँगै मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्न सत्तारुढ गठबन्धनकै नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन सुरु गरिएको छ ।...
अर्थ / पर्यटन एक्सिस खबर - ३ दिन अगाडि 0
काठमाडौं । भारतबाट महँगोमा तेल किनेर नेपालमा सस्तोमा बेचिरहेको नेपाल आयल निगम पूर्णरूपमा टाट पल्टेको छ । लामो समयदेखि घाटामा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री गर्दै...
BRI ले किन चिन्तित पश्चिमाहरु ? ६०० अर्बको PGII ले तोड्ता त चीनको प्रभुत्व ?
एक्सिस खबर -
एजेन्सी । देशहरूले चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको तुलनामा ६०० बिलियन डलरको पूर्वाधार योजना घोषणा गरेका छन्। गत वर्ष बेलायतमा भएको जी–७ देशको...
कोइरालाको सुझाव : पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर २६.६२ रुपैयाँ कर घटाउ
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको करमा प्रतिलिटर २६.६२ रुपैयाँ नलिने निर्णय गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।...
बजेट कार्यान्वयन भए देश आत्मनिर्भरतातिर लैजान्छ
काठमाडौं । सरकारले संसदमा पेश गरेको बजेट कार्यान्वयन भए देश परनिर्भताबाट आत्मनिर्भरतातिर जाने अघि बढ्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । उनीहरु आयतलाई प्रतिस्थापन र कृषि...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल आगल निगम खारेज गर्ने कुनै सोच नभएको बताएका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने...
बुटवल । रुपन्देहीको भलवारीस्थित नेपाल आयल निगमको प्रादेशिक डिपो परिसरमा इन्धन बोकेका दुई ट्यांकरमा आगलागी भएको छ । शुक्रबार डिपोमा तेल खन्याउने तयारी गर्ने...
लोकसेवा आयोगलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने नयाँ कानुन बन्यो
रडाकोको अर्को नाम प्रेस चौतारी : अध्यक्ष र महासचिवबीच जुहारी
एक्सिस खबर - ४ महिना अगाडि
कम्युनिस्ट अर्थमन्त्रीको नवउदारवादी बजेट : बाबुराम भुसाल
एक्सिस खबर - १ वर्ष अगाडि
अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टी लेनिनको संगठनात्मक पद्धतिले चल्न सक्दैन : राम कार्की
विकिनी किलर चाल्र्स शोभराजलाई थुनामा राखेको बारेमा कारण देखाऊ आदेश जारी
अन्तर्राष्ट्रिय एक्सिस खबर - ६ महिना अगाडि 0
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विकिनी किलर चाल्र्स शोभराज गुरुमुखलाई थुनामा राखेको बारेमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । विहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको...
इन्सपेक्टरमा जागिर लगाइदिने भन्दै ठगी गनर्दै आएका झापाका निलम भट्टराई पक्राउ
अपराध एक्सिस खबर - ८ महिना अगाडि 0
सुर्खेत । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले ठगी धन्दा चलाउने झापा निवासी निलम भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) मा...
काठमाडौं । गोरखामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सानदार जित निकालेको छ। गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले जिल्लामा आफ्नो प्रभाव...
बिहानैदेखि देश भरी बर्षा, हिमाली भेगमा हिमपात
टपन्यूज एक्सिस खबर - ६ महिना अगाडि 0
सीके राउतको चक्काजाम असफल पार्न सिरहामा दुई दिन निषेधाज्ञा
२८४ शाखा अधिकृतका लागि विज्ञापन खुल्यो
प्रदेश/स्थानीय तह एक्सिस खबर - ७ महिना अगाडि 0
सीता एयरको जहाज बँदेलसँग ठोक्किदा दुर्घटना
टपन्यूज एक्सिस खबर - ८ महिना अगाडि 0
भारतको आरोप : चीनले काँध थापेपछि नेपाल अमेरिकी सेना ल्याउन तयार भएन
सिंहदरबारका कर्मचारी प्रधानमन्त्रीसँग पनि डराउदैनन्, सरुवाबढुवामा ब्रिफकेस चल्छ : सचिव
ज्ञानेन्द्रसँग क्यानले राख्यो ‘मध्यमार्गी’ प्रस्ताव, खेलाडीले मागे भोलीसम्मको समय
विश्वकप ग्लोबल क्वालिफायरको बन्द प्रशिक्षणका लागि ३० खेलाडी छनोट
कप्तान मल्ल र उपकप्तान ऐरीसहित ४ जनालाई कारबाही, लामिछाने बने नयाँ कप्तान
एक्सिस खबर - ४ हप्ता अगाडि 0
एक्सिस खबर - ५ महिना अगाडि 0
काठमाडौं । समयमै काम सम्पन्न नगर्ने ७ निर्माण कम्पनीहरु कालो सूचीमा परेका छन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ताहाचल काठमाडौंले समयमै काम नसक्ने ७ निर्माण...
नोबेल मेडिकल कलेजको गुण्डागर्दी, गार्डको आक्रमणले ३ जना विद्यार्थी गम्भीर घाइते
विराटनगर । विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शूल्क लिएको भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका विद्यार्थीहरुलाई छेक्न खोज्दा नोबेल तनावग्रस्त बनेको छ । आइतबार रिले अनसन...
बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको चेतावनी
काठमाडौं । सरकारले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारितभन्दा बढी शुल्क लिएको गुनासो...
प्रदेश एक्सिस खबर - ६ महिना अगाडि 0
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगले समेत विश्वविद्यालय र विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीलाई राजनीति गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ । नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन चलिरहेका...
टपन्यूज एक्सिस खबर - ५ महिना अगाडि 0
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन् । मुलुकभर पछिल्लो २४ घण्टामा २ हजार ५२६ जनामा कोरोना संक्रमण...
अन्तर्राष्ट्रिय एक्सिस खबर - ५ महिना अगाडि 0
काठमाडाैं । बेलायतका वैज्ञानिकले कोरोना परीक्षण गर्ने सस्तो यन्त्र ‘ल्याब इन द ब्याकप्याक’ निर्माण गरेका छन् । यो मोबाइल किटले सार्स कोभ-२ पत्ता लगाउन...
पोखरा : गण्डकी प्रदेश सरकारले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने भएको छ । २ वर्षअघि आफ्नै विश्वविद्यालय स्थापना गरेकाे गण्डकीले तीन वटा विषयमा स्नातक पढाई...
फ्रान्स, भारत र जापानलाई पछार्दै खतरानाक हाईपवरसोनिक मिसाइल क्लबमा पुग्यो उत्तर कोरिया
आधारहीन र भ्रमपूर्ण समाचारको प्युठान सिमेन्टद्वारा खण्डन
काठमाडौं । नेपालगन्जबाट संचालित मिसन टुडे अनलाईनले प्रकाशित गरेको तथ्यहीन समाचारको प्युठान सिमेन्टले खण्डन गरेको छ । मिसन टुडेले दैनिकमा मिति २०७८ पुस २...
टपन्यूज एक्सिस खबर - ७ महिना अगाडि 0
काठमाडौं । नेपाल इकरात इन्जिनियरिङ कम्पनीले केही हप्तामै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नयाँ वितरण ट्रान्सफर्मरको आपूर्ति थाल्दैछ । हेटौंडामा निकको कारखानाले लामो समयपछि नेपालमै आफ्नो...
मुख्य समाचार एक्सिस खबर - ७ महिना अगाडि 0
काठमाडौं । सरकारले अजेयराज सुमार्गीको स्याटेलाइट प्रालि (हेलो नेपाल) लाई दिएको अनुमतिपत्र खारेज गरेको छ । शुक्रबार बसेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले...
पहिलो द भ्वाइस किड नेपाल बने जेनिस उप्रेती
एक्सिस खबर - ६ महिना अगाडि
गुरुङ समुदायले आज तमु ल्होसार मनाउँदै
रेखाका कारण अविवाहित बने सलमान
धोनीको चौकाको ह्याट्रिक, चेन्नई फाइनलमा
एक्सिस खबर - ९ महिना अगाडि